Inkqubo yoLwakhiwo lweMasonics nge-ETABS-Imodyuli 6-iGeofumadas
Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Inkqubo yoLwakhiwo lweMasonics nge-ETABS-Imodyuli 6
Ngale khosi uya kuba nakho ukulungiselela iprojekthi yendlu yokwenene eneendonga zokwakha, usebenzisa esona sixhobo sinamandla sokubala kwintengiso. Isoftware ye-ETABS 17.0.1
Yonke into enxulumene nemimiselo icacisiwe ngokweenkcukacha: iMigaqo yoYilo kunye noKwakhiwa kweZakhiwo zoKwakha iMasonry R-027. kwaye eyokugqibela iya kuthelekiswa neengcebiso ze-ACI318-14 ngokubhekisele kuyilo lweendonga zokucheba.
Kwangokunjalo, ukudityaniswa kweModeli yoQeqesho lweZiseko zoPhando, kusetyenziswa ukuNxibelelana-koMhlaba-woLwakhiwo. Ukongeza, uPhononongo lwangempela loMhlaba wale ndawo luya kwenziwa.
Ikhosi ye-Masonry yoLwakhiwo kunye ne-ETABS-iModyuli yesi-5